Shiinaha Qalabka Qalabka Cadceedda La qaadan karo ee MLW 100W Soo-saar iyo Warshad | Mutian
Qalabka Qalabka Solarka La qaadan karo ee MLW 100W
QAYBTA Moodalka Aqoonsiga MLWB-100 MLWB-200 MLWB-300 ...
Qalabka Awoodda Qoraxda ee La qaadan karo MLW 10W
QAYBTA Solar Panel Fiinta Power 10W Solar Pa ...
Solar Charge maamusha MPPT MC W Taxanaha
Qaab u Gaar ah (MPPT MC-W-) 20A 30A 40A 50A ...
Off Grid Solar Inverter MLWS Taxanaha
TUSAALAHA Model MLW-S 10KW 15KW 20KW 30KW 40K ...
Off Grid Solar Inverter MLWD Taxanaha
QAYBTA MUUQAAL-MLW-D 3KW 4KW 5KW 6KW 8KW 10K ...
Off Grid Solar Inverter MLWB Taxanaha
QAYBTA MUUQAAL-MLW-B 1KW 2KW 3KW 4KW 5KW 6KW ...
Off Grid Solar Inverter MLWL Taxanaha
QAYBTA MUUQAAL-MLL 0.5KW 1KW 2KW 3KW Syste ...
Qiimaha EXW: US $ 5 - 50 / Cadad
Tirada Min.Order: 1 Cad / Cadad
Shuruudaha Bixinta: T / T, L / C, PAYPAL, UN galbeedka, ALIBABA
Aqoonsiga Qaabka MLWB-100 MLWB-200 MLWB-300W MLWB-500W
Awood la qiimeeyay 100W 200W 300W 500W
Guddi Qoraxeed 100Wp × 1pc 100Wp × 2pcs 150Wp × 2pcs 200Wp × 2pcs
Batariga 12AH / 12V 24AH / 12V 40AH / 12V 60AH / 12V
Qalabka AC 100W 200W 300W 500W
Awoodda wax soo saarka USB 5VDC + 12VDC + AC110V / 220V ± 5% 50Hz / 60Hz ± 1%
Nalalka LED 2 kumbuyuutar 2 kumbuyuutar Xulasho Xulasho
Daacad u noqoshada macaamiisha kasta ayaa nala codsaday! Adeegga heerka koowaad, tayada ugu fiican, qiimaha ugu fiican iyo taariikhda bixinta ugu dhaqsaha badan ayaa ah faa iidadeena! Sii macmiil kasta adeeg wanaagsan waa caqiidadeena! Tani waxay ka dhigeysaa shirkaddayada inay helaan raalli ahaanshaha macaamiisha iyo taageerada! Ku soo dhawow dhamaan macaamiisha adduunka noo soo dir su'aalaha oo aan rajeyneyno wada-shaqeyntaada wanaagsan Fadlan weydiintaada wixii faahfaahin dheeri ah ama codsashada iibinta gobollada la soo xulay.
Kooxdayada injineernimada xirfadeed marwalba waxay diyaar u yihiin inay kuugu adeegaan latashi iyo jawaab celin. Waxaan sidoo kale awoodnaa inaan ku siino shaybaarro gabi ahaanba bilaash ah si aad ula kulanto shuruudahaaga. Dadaallada ugufiican ayaa suuragal ah in la soo saaro si laguu siiyo adeegga iyo alaabada ugu habboon. Qof kasta oo ka fekeraya shirkadeena iyo badeecadayada, hubi inaad nala soo xiriirto adoo noo soo diraya emayl ama si dhakhso leh noola soo xiriir. Sida dariiqa lagu ogaado badeecadeena iyo adkeysigaba. wax badan oo dheeraad ah, waad u imaan kartaa warshaddeena si aad u ogaato. Waxaan had iyo jeer ku soo dhaweyn doonnaa martida ka socota adduunka oo dhan ganacsigeenna si aan u dhisno xiriiro shirkad nala yeeshaan. Hubso inaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto ganacsiga waxaanan aaminsanahay inaan ku talajirnay inaan la wadaagno khibrada ganacsi ee ugu sarreysa ganacsatadeena oo dhan.
Hore: Qalabka Awoodda Qoraxda ee La qaadan karo MLW 10W
Xiga: Nidaamka Awoodda Qoraxda ee Grid-ka ee Ka Bax Guriga
2000w Qalabka Qalabka Qalabka Guriga ee Solar
Qalabka Awoodda Qoraxda oo Dhamaystiran Guryaha
Xidhmada Qalabka Korantada ee Qorraxda la qaadan karo
Qalabka Qalabka Qoraxdu Deggan tahay
Solar Power 220 Volt Kit Qoraxdu
Xidhmada Awood dhaliyaha Qorraxda
Qalabka Solar Power Solar
Qalabka Nidaamka Korantada ee Qoraxda